ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရုံတင်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရသည့် နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်ကားများ (ရုပ်သံ) - DVB
Lead Story Movie Crazy နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံ ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်း အနုပညာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရုံတင်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရသည့် နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်ကားများ (ရုပ်သံ)
အပတ်စဉ် ပုံမှန်တင်ဆက်နေကျဖြစ်တဲ့ Movie Crazy အစီအစဉ်ကနေ ခုတပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို လတ်တလော ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါတခုလို စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်ကြောင့် ပိတ်ထားတဲ့အတွက် ရုံတင်ပြသဖို့ ရွှေ့ဆိုင်းထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတချို့အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ် Horror Thriller အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ A Quiet Place Part II !
ဒီကားကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ A Quiet Place ရုပ်ရှင် ကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Paramount Pictures က တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ ဒီကားကိုတော့ အရင်ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာ John Krasinski က ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
A Quiet Place ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ကမ္ဘာမြေဟာ ဘယ်ကနေရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ အကောင်ကြီးတွေကြောင့် တော်တော်ကို ပျက်စီးနေခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် သဘာဝရဲ့ အသံတွေကလွဲရင် ကျန်တဲ့အသံတွေကို မကြားရတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖျက်ဆီးသတ်ဖြတ်နေတဲ့ အကောင်တွေက အမြင်အာရုံမရှိပေမယ့် အကြားအာရုံမှာ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် အသံလေး နည်းနည်းကြားတာနဲ့ လိုက်ရှာပြီး သတ်ဖြတ်တာကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒီလိုအခြေအနေမှာ အသက်ရှင်ကျန်နေသူတွေထဲက မိသားစုတစုအကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းဆင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ဇာတ်လမ်းဆုံးတဲ့တိုင် ပရိသတ်တွေကို ရင်တမမနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ ခုနောက်ဆက်တွဲ အပိုင်း ၂ ထဲမှာရော ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ ပါဝင်လာမလဲ၊ ပထမကားနဲ့ မတူတဲ့ ဘယ်လိုဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာတွေကို ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာပါ။
နောက်ထပ်ထူးခြားတာကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအပြင် လက်ဟန်သင်္ကေတပြ ပြောဆိုရတဲ့ American Sign Language ကိုလည်း အသုံးပြုထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
A Quiet Place Part2ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ပထမရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Emily Blunt နဲ့အတူ တခြားသ ရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Millicent Simmonds ၊ Noah Jupe ၊ Cillian Murphy ၊ Djimon Hounsou တို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင် A Quiet Place ဟာ Box Office မှာ ရုံတင်ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၄၀ ကျော် ရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တာမို့ ခုအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြတာပါ။
Box Office မှာတော့ ဒီကားကို ရုံတင်ပြသမယ့် ပထမသီတင်းပတ်မှာတင် ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၂ သန်း ရရှိနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ကြာမြင့်ချိန် ၉၆ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ လာမယ့် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ရုံတင် ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ထူးခြားတဲ့ ပုံစံတမျိုးနဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဟောလိဝုဒ် Comedy Drama အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်-The Climb !
ဒီကားကိုတော့ ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသား Michael Angelo Covino က သူကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ ရိုက်ကူး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ နှစ်ကာလများစွာ ညီရင်းအစ်ကိုတွေလို ချစ်ခင်ရင်းနှီးကြသူတွေ ကြား ထင်မှတ်မထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အဲဒီရင်းနှီးချစ်ခင်မှုစည်းကို ဖျက်ဆီး လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ တည်မြဲတဲ့ ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို ပြသထားခဲ့တာပါ။ Kyle နဲ့ Mike တို့က စားအတူ သွားအတူရှိကြတဲ့ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေ သူ ငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ Mike က Kyle နဲ့ စေ့စပ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ အိပ်ယာပေါ်က ဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့ကြချိန်မှာတော့ အခြေအနေဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါက နယ်လွန်စည်းတခု ဖြစ်လာခဲ့လေမလား၊ ဒီနောက်ကွယ်မှာရော ဘယ်လိုအကြောင်းအချက်တွေ ရှိနေမလဲ၊ သူတို့ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားကြမလဲ၊ ဘယ်လိုဇာတ် လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာကို ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Michael Angelo Covino ၊ Kyle Marvin နဲ့ Gayle Rankin တို့က အဓိက ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုဖြစ်တဲ့ Cannes Film Festival အပါအဝင် တခြားရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာလည်း Official Selection အနေနဲ့ ကနဦး ပြသခဲ့ပြီး ချီးကျူးမှုတွေလည်း ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ IMDb မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Rating 7.2 အထိ ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကား ကောင်းတကား ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၉၄ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ နိုင်ငံတကာမှာ လာမယ့် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က စတင်ပြီးတော့ ရုံတင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ဒီတခါ မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကတော့ ဂျိမ်းစ် ဘွန်းရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြမယ့် No Time To Die !
Universal Pictures ကနေ ဖြန့်ချိပေးသွားမယ့် ဒီကားကိုတော့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ် ရှင်ဒါရိုက်တာ Cary Joji Fukunaga က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာပါ။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်စီးရီးစ်တွေကတော့ ပရိသတ်တွေကို အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီကားကတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်စီးရီးစ်တွေရဲ့ ၂၅ ကားမြောက် ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်ပြီး ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ကို ကယ်တင်မယ့် စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူလျှိုဇာတ်ကောင် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းအဖြစ် ဗြိတိန်သရုပ်ဆောင်မင်းသား Daniel Craig က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
သူသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ “Spectre” ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ တကမ္ဘာ လုံး ရုံတင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၈၀ ရရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ အမြတ်အများဆုံးရုပ်ရှင် ကား စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထွက်ရှိလာတဲ့ “Skyfall” ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ကားဟာလည်း တကမ္ဘာလုံး ရုံတင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံကျော် ရရှိခဲ့ပြီး ဘွန်းအဖြစ် သူကပဲ သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။
အခုအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Daniel Craig ရဲ့ ပဉ္စမမြောက်နဲ့ နောက်ဆုံးပါဝင်မယ့် ရုပ်ရှင်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ သူနဲ့အတူ အော်စကာဆုရှင် သရုပ်ဆောင်မင်းသား Rami Malek ကလည်း ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်တဦးအနေနဲ့ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး တခြားဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Léa Seydoux ၊ Ben Whishaw ၊ Naomie Harris စတဲ့ သ ရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ထားကြပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြ ကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ် တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြု ချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီကားကိုတော့ ဘတ်ဂျတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀ အကုန်အကျခံရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီကားကိုတော့ အစက လာမယ့်ဧပြီလဆန်းမှာ ရုံတင်ပြသသွားမယ်လို့ ကြေညာထားပေမယ့် လတ်တလော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့် ရုံတင်မယ့်ရက်ကို အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ရုံမတင်ခင်ကတည်းက နာမည်ကြီးနေခဲ့တဲ့ Adventure Action Drama အမျိုးအစားရုပ်ရှင် Mulan !
ဒီကားကိုတော့ နာမည်ကျော် Walt Disney Pictures ကနေ တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး နယူးဇီလန် အမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Niki Caro က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာပါ။
Mulan လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေက ၁၉၉၈ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် ကာတွန်းကားကို ပြန်ပြီးတော့ အမှတ်ရမိကြမှာပါ။ ဒီတခါမှာတော့ ဒီကားကို ကာ တွန်းရုပ်ရှင်အနေနဲ့ မဟုတ်တော့ပဲ လူဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ Live Action ရုပ်ရှင်ကားတ ကားအနေနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်မင်းနေပြည်တော်ကြီးမှာ မြောက်ပိုင်းက ကျူးကျော်လာသူတွေကို ပြန် ပြီးတော့ တိုက်ခိုက်ဖို့ အိမ်ထောင်စုတိုင်းက အမျိုးသားတယောက်စီ ထွက်ပြီး ဘုရင့်တပ် မတော်ထဲ စစ်မှုထမ်းဖို့ အမိန့်ထွက်လာပါတယ်။ Hua Mulan ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက တော့ မိသားစုမှာ သမီးအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ပြီး နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ ဖခင်ရဲ့အစား တပ်ကို ယောက်ျားလေး အယောင်ဆောင်ပြီး ဝင်သွားခဲ့ချိန်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ၊ ဘယ်လိုတွေ ကြုံတွေ့ရမလဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြီး ပြတ်သားရဲရင့်တဲ့ Hua Jun ဆိုတဲ့ ‌အမျိုးသားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ရင်း ဘုရင့်တပ်မတော်ထဲမှာ အမျိုးသားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ဂူဂူးလို့ ပရိသတ်တွေ သိကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Liu Yifei က အဓိကဇာတ်ကောင် Mulan နေရာက ပါဝင်ထားပါတယ်။ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Gong Li ကတော့ ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲလုပ်နိုင်တဲ့ စုန်းမတယောက်အဖြစ် ပါဝင်ထားပြီး တခြားသရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Donnie Yen ၊ Jet Li စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ထားကြပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြ ကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ် တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီကားကိုတော့ ဘတ်ဂျတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ အကုန်အကျခံရိုက်ကူး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကိုတော့ အစက အခုလကုန်သီတင်းပတ်မှာ ရုံတင်ပြသသွားမယ်လို့ ကြေ ညာထားပေမယ့် လတ်တလော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့် ရုံတင်မယ့်ရက်ကို အ ကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Movie Crazy-DVB အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညတိုင်း ၇.၄၅ နာရီ၊ ၉.၁၅ နာရီတွေမှာ DVB TV channel ကနေ ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး မ ကြည့်ရှုလိုက်ရသူတွေအတွက် ကြာသပတေးနေ့မနက် ၉.၁၅ နာရီ၊ နေ့လည် ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅ နာရီ၊ သောကြာနေ့ နေ့လယ် ၂.၄၅ နာရီ၊ စနေနေ့ မနက် ၁၁.၄၅ နာရီနဲ့ တနင်္လာနေ့မနက် ၉.၄၅ နာရီတို့မှာ ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအနှံ့ ကပ်ရောဂါတခုလို ဖြစ်လာနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်း ရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း အရေးတကြီး လုပ်ဆောင်ကြဖို့ လိုအပ်ပါလာပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းဌာနတွေ၊ ရင်းမြစ်တွေဆီက သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဂရုပြုနားဆင်ကြဖို့၊ လိုက်နာကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။
Tags: movie Crazyကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရုပ်ရှင်ကားရုံတင်ရက်ရွှေ့ဆိုင်
Previous story အကယ်ဒမီ ရွှေကြိုမောင်မယ်ရွေးချယ်ပွဲတွင် ခန့်ညီဇော်၊ စနိုးကြည်ဖြူတို့ ပရိသတ်အချစ်ဆုံး ဆုရ (ရုပ်သံ)
Next story အမေရိကန် ကန်းထရီးအဆိုတော်ကြီး Kenny Rogers ဈာပန အကျဉ်းချုံးကျင်းပမည်